မက်ဒရစ်မြေက (၉)နှစ်ကြာ အိပ်မက်တစ်ခုကို အဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒို
(၉)နှစ်ကြာ ကစားခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်နဲ့ လမ်းခွဲပြီး ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့မယ့် C.Ronaldo
11 Jul 2018 . 2:19 AM
ရီးယဲလ်အသင်းရဲ့ ပေါ်တူဂီနာမည်ကျော်တိုက်စစ်ကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒို C.Ronaldo ဟာ (၉)နှစ်ကြာ ကစားခဲ့တဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲပြီး စီးရီးအေထိပ်သီးကလပ် ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရီးယဲလ်နဲ့ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းတို့က ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေမှာ အတည်ပြုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာပါ။ လက်ရှိ Ballon d’Or အကောင်းဆုံးဆုရှင် စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ စာချုပ်သစ်ကိစ္စအတွက် ရီးယဲလ်ဥက္ကဋ္ဌ ဖလော်ရင်တီနိုပီရက်ဇ် Florentino Perez နဲ့ အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် ရီးယဲလ်အသင်းကနေ ထွက်ခွာဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မီဒီယာတွေက ခန့်မှန်းခဲ့ကြတယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းက “ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ စီရော်နယ်လ်ဒိုက တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လက်ခံစဉ်းစားပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ စီရော်နယ်လ်ဒို ဂျူဗင်တပ်စ်ကို ပြောင်းရွှေ့မယ့်ကိစ္စက သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါပြီ”လို့ ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်။ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းဟာ စီရော်နယ်လ်ဒိုအတွက် ပြောင်းရွှေ့ကြေး ယူရိုသန်း(၁၀၀)ပေးချေဖို့ သဘောတူညီခဲ့ပြီး အပိုထပ်ဆောင်းအဖြစ် ယူရို(၁၂)သန်း ပေးချေမှာဖြစ်သလို စီရော်နယ်လ်ဒိုကို (၄)နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အသက်(၃၃)နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ (၃)နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေပြီး (၁)နှစ်လစာအဖြစ် ခန့်မှန်းခြေ ယူရို(၃၈.၅)သန်းရရှိနေသူပါ။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့လစာက အဓိကပြိုင်ဘက်တွေဖြစ်ကြတဲ့ မက်ဆီ(ယူရို၇၃.၆သန်း)၊ နေမာ (ယူရို ၆၆သန်း)တို့ထက်နည်းပါးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်းအနေနဲ့ စီရော်နယ်လ်ဒိုကို စာချုပ်လျော်ကြေး ယူရို(၁)ဘီလီယံအထိ ချုပ်ဆိုထားပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒိုက အသင်းပြောင်းခွင့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာကြောင့် အဲဒီပမာဏရဲ့ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့ ယူရိုသန်း(၁၀၀)နဲ့ ရောင်းချဖို့ သဘောတူညီခဲ့တာပါ။ စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းမှာ (၁)နှစ်လစာအဖြစ် ယူရိုသန်း(၃၀)နီးပါး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် သွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမား စီရော်နယ်လ်ဒိုဟာ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ (၉)နှစ်တာကာလအတွင်း ချန်ပီယံလိဂ်(၄)ကြိမ်အပါအ၀င် ဆုဖလားပေါင်းများစွာ ရယူခဲ့သလို တစ်ဦးချင်းအကောင်းဆုံးဆုတွေ၊ စံချိန်မှတ်တမ်းများစွာ တင်ရှိနိုင်ခဲ့သူည်းဖြစ်ပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒိုက “ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့ မက်ဒရစ်မြို့မှာ နေထိုင်ခဲ့ရတဲ့နှစ်တွေဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ အပျော်ရွှင်ရဆုံးအချိန်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရီးယဲလ်အသင်း၊ ပရိသတ်တွေနဲ့ မက်ဒရစ်မြို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ခံစားချက် အများကြီးရရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကို အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုအချိန်ဟာ ကျွန်တော့်ဘ၀စာမျက်နှာသစ် စတင်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့်ပဲ ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းနဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကို လက်ခံဖို့ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီလိုတောင်းဆိုခဲ့တဲ့အတွက်လည်း ပရိသတ်တွေ နားလည်ပေးဖို့ ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်”လို့ ဆိုခဲ့တယ်။
ရီးယဲလ်အသင်းနဲ့အတူ စီရော်နယ်လ်ဒိုရရှိခဲ့တဲ့ ဆုဖလားများ
ဂျူဗင်တပ်စ်အသင်းရဲ့ စံချိန်တင် ကစားသမားခေါ်ယူမှု
စီရော်နယ်လ်ဒို 100.00 Mill. €
ဟီဂွါအင် 90.00 Mill. €
ဘူဖွန် 52.88 Mill. €
သူရမ် 41.50 Mill. €
ကန်ဆယ်လို 40.40 Mill. €
Photo:Goal.com,japantimes.co,Getty Images,101 Great Goals
(၉)နှဈကွာ ကစားခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျနဲ့ လမျးခှဲပွီး ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို ပွောငျးရှမေ့ယျ့ C.Ronaldo
ရီးယဲလျအသငျးရဲ့ ပျေါတူဂီနာမညျကြျောတိုကျစဈကစားသမား စီရျောနယျလျဒို C.Ronaldo ဟာ (၉)နှဈကွာ ကစားခဲ့တဲ့ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့လမျးခှဲပွီး စီးရီးအထေိပျသီးကလပျ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို ပွောငျးရှတေ့ော့မှာဖွဈပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုရဲ့အပွောငျးအရှသေ့တငျးနဲ့ပတျသကျပွီး ရီးယဲလျနဲ့ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးတို့က ပွီးခဲ့တဲ့အင်ျဂါနမှော အတညျပွုထုတျပွနျကွညောခဲ့တာပါ။ လကျရှိ Ballon d’Or အကောငျးဆုံးဆုရှငျ စီရျောနယျလျဒိုဟာ စာခြုပျသဈကိစ်စအတှကျ ရီးယဲလျဥက်ကဋ်ဌ ဖလျောရငျတီနိုပီရကျဇျ Florentino Perez နဲ့ အဆငျမပွဖွေဈခဲ့တာကွောငျ့ ရီးယဲလျအသငျးကနေ ထှကျခှာဖို့ ဆုံးဖွတျခဲ့တာဖွဈတယျလို့ မီဒီယာတှကေ ခနျ့မှနျးခဲ့ကွတယျ။
ရီးယဲလျအသငျးက “ဂြူဗငျတပျဈအသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့ စီရျောနယျလျဒိုက တောငျးဆိုခဲ့တာကွောငျ့ ကြှနျတျောတို့ လကျခံစဉျးစားပေးခဲ့ပါတယျ။ အခုအခြိနျမှာ စီရျောနယျလျဒို ဂြူဗငျတပျဈကို ပွောငျးရှမေ့ယျ့ကိစ်စက သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့ပါပွီ”လို့ ထုတျပွနျကွညောခဲ့တယျ။ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးဟာ စီရျောနယျလျဒိုအတှကျ ပွောငျးရှကွေ့ေး ယူရိုသနျး(၁၀၀)ပေးခဖြေို့ သဘောတူညီခဲ့ပွီး အပိုထပျဆောငျးအဖွဈ ယူရို(၁၂)သနျး ပေးခမြှောဖွဈသလို စီရျောနယျလျဒိုကို (၄)နှဈစာခြုပျခြုပျဆိုသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အသကျ(၃၃)နှဈအရှယျရှိပွီဖွဈတဲ့ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ (၃)နှဈစာခြုပျသကျတမျးကနျြရှိနပွေီး (၁)နှဈလစာအဖွဈ ခနျ့မှနျးခွေ ယူရို(၃၈.၅)သနျးရရှိနသေူပါ။ ဒါပမေဲ့ သူ့ရဲ့လစာက အဓိကပွိုငျဘကျတှဖွေဈကွတဲ့ မကျဆီ(ယူရို၇၃.၆သနျး)၊ နမော (ယူရို ၆၆သနျး)တို့ထကျနညျးပါးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျးအနနေဲ့ စီရျောနယျလျဒိုကို စာခြုပျလြျောကွေး ယူရို(၁)ဘီလီယံအထိ ခြုပျဆိုထားပမေယျ့ စီရျောနယျလျဒိုက အသငျးပွောငျးခှငျ့ပေးဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တာကွောငျ့ အဲဒီပမာဏရဲ့ (၁၀)ရာခိုငျနှုနျးဖွဈတဲ့ ယူရိုသနျး(၁၀၀)နဲ့ ရောငျးခဖြို့ သဘောတူညီခဲ့တာပါ။ စီရျောနယျလျဒိုဟာ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးမှာ (၁)နှဈလစာအဖွဈ ယူရိုသနျး(၃၀)နီးပါး ရရှိမှာဖွဈပါတယျ။
ရီးယဲလျအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ သှငျးဂိုးအမြားဆုံးကစားသမား စီရျောနယျလျဒိုဟာ ရီးယဲလျကစားသမားဘ၀ (၉)နှဈတာကာလအတှငျး ခနျြပီယံလိဂျ(၄)ကွိမျအပါအဝငျ ဆုဖလားပေါငျးမြားစှာ ရယူခဲ့သလို တဈဦးခငျြးအကောငျးဆုံးဆုတှေ၊ စံခြိနျမှတျတမျးမြားစှာ တငျရှိနိုငျခဲ့သူညျးဖွဈပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒိုက “ရီးယဲလျအသငျးနဲ့ မကျဒရဈမွို့မှာ နထေိုငျခဲ့ရတဲ့နှဈတှဟော ကြှနျတေျာ့ဘဝမှာ အပြျောရှငျရဆုံးအခြိနျတှဖွေဈခဲ့ပါတယျ။ ရီးယဲလျအသငျး၊ ပရိသတျတှနေဲ့ မကျဒရဈမွို့နဲ့ပတျသကျပွီး ကြှနျတေျာ့မှာ စိတျခံစားခကျြ အမြားကွီးရရှိခဲ့ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ကို အားပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျတှကေို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုအခြိနျဟာ ကြှနျတေျာ့ဘဝစာမကျြနှာသဈ စတငျဖို့အခြိနျရောကျလာပါပွီ။ ဒါကွောငျ့ပဲ ဂြူဗငျတပျဈအသငျးနဲ့အပွောငျးအရှကေို့ လကျခံဖို့ တောငျးဆိုခဲ့တာပါ။ ဒီလိုတောငျးဆိုခဲ့တဲ့အတှကျလညျး ပရိသတျတှေ နားလညျပေးဖို့ ကြှနျတျောမြှျောလငျ့ပါတယျ”လို့ ဆိုခဲ့တယျ။
ရီးယဲလျအသငျးနဲ့အတူ စီရျောနယျလျဒိုရရှိခဲ့တဲ့ ဆုဖလားမြား
ဂြူဗငျတပျဈအသငျးရဲ့ စံခြိနျတငျ ကစားသမားချေါယူမှု
စီရျောနယျလျဒို 100.00 Mill. €
ဟီဂှါအငျ 90.00 Mill. €
ဘူဖှနျ 52.88 Mill. €
သူရမျ 41.50 Mill. €
ကနျဆယျလို 40.40 Mill. €